Dhaamsa - Independent Oromia
Hubannaa Waliigalaa Dhibee Daddarbaa Koronaa (COVID-19) – Ogeeyyii Fayyaa Oromootiin
Dhibee Daddarbaa Koronaa – Hubannaa Waliigalaa Miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo fi Uummata Keenya Bal’aaf Sabboontota Ogeeyyii Fayyaa Oromoodhaan Qophaa’e.
Maxxansi kun barruu gabaabaa, Dhibee Daddarbaa Koronaa (COVID-19) – Hubannaa Waliigalaa Miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo fi Uummata Keenya Bal’aaf Sabboontota Ogeeyyii Fayyaa Oromoodhaan Qophaa’e, jedhu dubbistoota bal'aaan ga'uuf yaadamee, eeyyama barreessitootaatiin fuula kana irratti kan maxxanfamedha. Dubbisaa; maatii fi hiriyoota keessanifis qooduun dubbisiisaa! Hubannoo waliigalaa uummanni keenya dhibee kana irratti qabu gabisuun, biyyaa-saba keenya haa baraarruun waamicha keenya.
Read more: Hubannaa Waliigalaa Dhibee Daddarbaa...
Waamicha Deggersa RSWO - Fundraiser by Walabummaa Oromiyaa
WAAMICHA DEGGERSA RSWO
Riqicha odeeffannoo ta'uun, Qondaaltotaa fi miseensota WBO iyyaafatee, haala sochii fi dhaamsa WBO uummata Oromoo bal'aa dhageessisa; yaadaaf dhaamsa uummataas odeeffatee wabii sabichaa kan ta'e WBO gurra-buusa;
Shira mootummaan nafxanyootaa maqaa Oromoon daldalu, qabsoo bilisummaa Oromoo'rratti xaxu saaxila; roorroo uummata keeny'rra ga'us hordofee gabaasa;
Sagalee Uummata keenyaa, goleelee Oromiyaa maratti wal-dhageessisa;
Qabsoo Saba Oromoo bilisaa fi Biyya Oromo walaba, sirna diimokiraasii fi haqaan bulu, deebisanii gad-dhaabuuf godhamuuf sagalee ta’ee hojjeta. Kanaaf, Sabboontonni Ilmaan Oromoo kanneen akeeka RSWO hirmaattan marti, diinagdeen bira dhaabachuun, itti-fufiinsa hojiisaafi milkaa'ina akeekasaatiif akka gumaachitan waamicha lammuummaa, kabajaa Oromummaa waliin isiniif dhiheessina.
Hidha armaan gadii tuquudhaan RSWO Gargaaraa.
RSWO Adooleessa 2017 - SEENAA OBBO EDA'OO ODAA BORUU GUUTUU
RSWO - Adoolessa 14, 2018: Dhaamsa [Impaayerri kan hin Diimokiraatofne ta'uu]
Addunyaa nuti irra jiraannu kana keessa, Impaayerootni gurguddoon, Impeeriyaalistoota yartuudhaan ijaaramanii dachee sabootaafi biyyoota danuu weeraruun, daangaa kolonii bal’aa ijaarratan danuun kan turan ta’uu galmee seenaatu addeessa. Sirni kolonii, ganamumaan, sirna fedhii yartootaa bu’uura godhachuudhaan, tooftaa xiqqaa guddaarratti goobsuutiin wixineeffame ta’uufi; Impaayerri koloniis, godoo yartootaan ijaarameefi; kan gurguddoonni danuun keessatti yaratan ta’uu akkuma Macci beeku, sirnichis waan of beekuuf,
Read more: RSWO - Adoolessa 14, 2018: Dhaamsa...